အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရသည် COVID-19 တတိယလှိုင်း အတွက် လာမည့်ရက် ၁၀၀ သည် အရေးကြီးကြောင်း သတိပေး - Xinhua News Agency
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးစင်တာ၌ အမျိုးသမီးတစ်ဦး COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုခံယူနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ-- Str/Xinhua)
နယူးဒေလီ၊ ဇူလိုင် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားလာနိုင်သည့် COVID-19 တတိယလှိုင်းအား ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် လာမည့် ရက်ပေါင်း ၁၀၀ မှ ၁၂၅ ရက်သည် အရေးကြီးကြောင်း အိန္ဒိယဖက်ဒရယ်အစိုးရက ဇူလိုင် ၁၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။အိန္ဒိယ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်ပညာရှင်အဖွဲ့အစည်း (NITI) Aayog (ကော်မရှင်) ၏ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင် V. K. Paul က နယူးဒေလီမြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် ထိုသို့ သတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူထုဟာ ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းနည်းနေတုန်းပါပဲ။ နောက်ထပ် ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ကနေ ၁၂၅ ရက်ဟာ အရေးကြီးပြီး ကျွန်တော်တို့အားလုံး သတိဝီရိယရှိရှိနဲ့ COVID-19 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာကြဖို့ လိုပါတယ်’’ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် COVID-19 တတိယလှိုင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတိပေးချက်မှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေအတွက်ဖြစ်ပြီး သက်ရောက်မှုအား ထင်ဟပ်စေကြောင်း Paul က ဆိုသည်။
အိန္ဒိယ ထိပ်တန်း ကျန်းမာရေး သုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်သော အိန္ဒိယ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီ (ICMR) ၏ ကူးစက်ရောဂါဗေဒနှင့် ကူးစက်ရောဂါများဌာန အကြီးအကဲ ဒေါက်တာ Samiran Panda က COVID-19 တတိယလှိုင်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ သြဂုတ်လကုန်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိကြောင်း ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။သို့ရာတွင် တတိယလှိုင်းသည် အားပျော့နိုင်ဖွယ်ရှိပြီး ဒုတိယလှိုင်းကဲ့သို့ မပြင်းထန်သည့် အခွင့်အလမ်းများရှိကြောင်း Panda က ဆိုသည်။ (Xinhua)
Indian gov’t warns of COVID-19 3rd wave, says next 100 days crucial
NEW DELHI, July 16 (Xinhua) — India’s federal government Friday said there wasaneed to take precautions against the third wave of COVID-19 that is likely to break out in the country and the next 100 to 125 days are crucial.
The warning was given by V K Paul,amember (health) of government think-tank National Institution for Transforming India (NITI) Aayog (commission) duringamedia briefing in New Delhi.
“Our population is still vulnerable … The next 100 to 125 days will be crucial and we all need to remain vigilant and follow the protocol,” he said.
Paul said the warning about the third wave of the COVID-19 which the World Health Organization has recently issued is for the global situation, which is reflecting the impact.
On Thursday, head of Epidemiology and Infectious Diseases at India’s top health research body — Indian Council of Medical Research (ICMR), Dr Samiran Panda said the third wave of COVID-19 is likely to hit the country at the end of August. Panda, however, said there are chances that the third wave will beamild one and not as intense as the second wave. Enditem